अत्यन्तै दुखको खबर ! तुलसीपुरस्थित जुत्ता चप्पलको गोदाममा आग’लागी लाग्दा पाँच जनाको मृ’त्यु – Nep Stok
अत्यन्तै दुखको खबर ! तुलसीपुरस्थित जुत्ता चप्पलको गोदाममा आग’लागी लाग्दा पाँच जनाको मृ’त्यु
फागुण ९, २०७८ सोमबार 354
दाङको तुलसीपुरस्थित एक जुत्ता चप्पलको गोदाममा लागेको भि’षण आग’लागीमा परेर पाँच जनाको मृ’त्यु भएको छ ।
गएराती पौने २ बजेदेखि इरम फुटवेयर चप्पल गोदाम रहेको चार तले घरमा लागेको आ’गोमा परेर एक महिला २ पुरुष र दुई बालबालिकाको मृ’त्यु भएको प्र’हरीले बताएको छ ।
भने आ’गोमा परेर एक जना घा’ईते भएका छन् । मृ’तकहरुको शव जलेको अवश्थामा निकालिएको छ । मृ’तक र घा’ईतेहरुको अहिले तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा लगिएको प्र’हरीले बताएको छ । आगो अहिले नियन्त्रणमा आएको छ ।
ईलाका प्र’हरी कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार शुक्रबार विहान २ बजेतिर आ’गलागी हुँदा पाँच जनाको मृ’त्यु भएको हो ।
प्र’हरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालका अनुसार मृ’त्यु हुनेमा १० बर्षीय एक बालक, १५/१५ बर्षीय दुई बालक र एक बालिका तथा करिब ५५ बर्षीय एक पुरुषको मृ’त्यु भएको हो । उनीहरुको पहिचान हुन बाँकी छ । आगो कम भएपछि साढे ७ बजेतिर शब निकालिएको हो । तिमध्ये घरको तेस्रो तलाबाट ३ जना र चौथो तलाबाट २ जनालाई निकालिएको हो ।
पाँचै जना निसास्एिर मृ’त्यु भएको प्रहरीले बताएको छ ।‘तेस्रो तलामा रहेकाहरु निसास्एिर मृ’त्यु भएको जस्तो देखिन्छ’प्र’हरी भन्यो‘चौथो तलामा रहेकाहरु अलिअलि जलेका पनि छन् ।’ इरम फुटवेयर चप्पल गोदाममा आग’लागी भएको थियो ।
विद्युतको मिटर पड्किदा आगलागी भएको प्र’हरीले बताएको छ । तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाको दमकलले आगो नियन्त्रणमा लिइरहेको छ ।
पहिलो तलाबाट आगलागी सुरु भएको हो । इलाका प्र’हरी कार्यालय तुलसीपुुर, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयको सक्रियतामा आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिएको छ ।
Prevकपिलवस्तुमा दोस्रो पटक स- हवा-स ग’र्न नमानेपछि ४० वर्षिय देवरले लिए भाउजुको ज्यान
Nextयी युवकको गहिरो प्रेममा रश्मिका, छिट्टै बिहे गर्दै : हेर्नुहोस